Myanmar Cele Star -
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က အဆိုတော် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ၂၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်မွေးနေ့တွေမှာတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဖြတ်သန်းခဲ့ပေမယ့် ယခုနှစ်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့် အွန်လိုင်းကနေပဲ ပရိသတ်တွေနဲ့ Live လွှင့်ရင်းဖြတ်သန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာ မြန်မာအိုင်ဒေါ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေ တဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ 1st Runner Up ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်တော်အခွေဖြစ်တဲ့ Eleven သီချင်းခွေလည်း ထွက်ရှိထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုအတိုင်းအတာတခုထိ ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ၂၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ ပရိသတ်တွေဆီကဘယ်လိုလက်ဆောင်လေးတွေရခဲ့လဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ “၂၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ၂၁ မြို့နယ်မှ milestones တို့က မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် မုန့်ဖိုးတွေစုပီးပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အရမ်းပျော်ရွှင်ရပါတယ် နောက်နှစ်မွေးနေ့မှာ အကုန်လုံးနဲ့တူတူဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်...
Home Quarantine (၁၄) ရက်ဝင်နေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်က ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါအကြောင်းကို ပြောပြလာပါတယ်။ ကိုဗစ်ရဲ့ ရိုက်ခက်မှုဒဏ်ကို သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ခဲအိုဖြစ်သူက ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီး ရက်ပိုင်းအကြာလေးမှာတင် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့် ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းကြောင်းကို နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစုက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ညီမဖြစ်သူ နွေးနွေးလှိုင်ကိုယ်တိုင်လည်း Positive ထွက်ခဲ့ပြီး ကျန်နေခဲ့တဲ့ ကလေး (၃) ယောက်ကိုတော့ မောင် ဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင်က စောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့တာပါ။ ကလေး (၃) ယောက်နဲ့ မောင် ကိုတော့ Swab Test ယူစစ်ထားပြီး ကလေး (၃) ယောက်နဲ့ ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ကိုတော့ Secondary Contact တွေဖြစ်တာကြောင့် Home Quarantine နေထိုင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်က ကိုဗစ်ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပုံကို လူတွေရဲ့ သေခြင်းတရားဖြစ်တဲ့ နေ့မြင်ညပျောက်တောင်မဟုတ်ဘဲ ခုမြင်ခုပျောက်...
သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစုကတော့ Secondary Contact ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Home Quarantine ဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်၏ ညီမဖြစ်သူ နွေးနွေးလှိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ကိုငွေဇော်ဟာ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ကိုဗစ်ရောဂါ ကုသမှုခံယူနေရင်း ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါဟာ အသက်အရွယ်မရွေး၊ လူတန်းစားမရွေး ကိုကူးစက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးနောက်မှာလည်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းတွေကြောင့် ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်တဲ့အတွက် သတိထားဆင်ခြင်သွားလာနေထိုင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ခဲအိုဖြစ်သူ ကိုငွေဇော်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ ဆေးစစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သားသမီး ၃ ယောက်ကိုတော့ သရုပ်ဆောင် မောင် က သူကိုယ်တိုင် Quarantine ဝင်ပြီး စောင့်ရှောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစုကလည်း Secondary Contact တွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Home Quarantine ဝင်နေရကြောင်းကို မောင် ဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင်က ပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့...
အဆိုတော်အိမ့်ချစ်က သူချစ်ရတဲ့သူနဲ့ သိပ်မကြာသေးခင်အချိန်ကပဲ ရွှေလက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလကြောင့် မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးခြင်းတို့ကိုသာ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ အီဖယ်လ်တာဝါကြီးရှေ့မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဲရစ်ရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းကို ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိုလျို့ဝှက်ထားတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အိမ့်ချစ်ရဲ့ Propose လုပ်ခံရတဲ့ သတင်းလေးက သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့ အိမ့်ချစ်တို့စုံတွဲက သူတို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ Pre Wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေဆီ ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိသတ်တွေအားကျသွားစေရလောက်မယ့် Pre Wedding ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း ချပြပေးခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Cele Star – YS
အဆိုတော်မလေး မေလသံစဉ် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်တလောကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်ကာလမှာ လုပ်အားပေးတွေနဲ့ Q ဝင်သူအရေအတွက် မမျှတတာတွေဖြစ်နေကြတဲ့အပေါ် တတ်နိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ့်အကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေ့ခ်ျကနေ ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ အရေးကြီးရင်သွေးစည်းတတ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ယခုကိုဗစ်ရောဂါရဲ့ ဒုတိယလှိုင်းမှာလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီပါဝင်လှူဒါန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာသူများက ငွေကြေးအလျှောက် ၊ ကာယစွမ်းအားတတ်နိုင်သူတွေက ကာယစွမ်းအားအလျှောက် လူတန်းစားအစုံ အနုပညာရှင်တွေကပါ ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် များပြားလာတာနဲ့ အမျှ လုပ်အားပေး ကူညီပေးသူအရေအတွက်တွေနဲ့ မမျှမတဖြစ်လာခဲ့ပြီး လိုအပ်ချက်တွေ၊ လစ်ဟာမှုတွေဟာ ရှိလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို Volunteer အင်အားနဲ့ Q ဝင်သူအရေအတွက်ကြားမှာ ကွာဟမှုကြီးကြီးမားမားတွေရှိလာပြီး အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတာကြောင့် အဆိုတော်မေလသံစဉ်ကလည်း သူမကူညီနိုင်တဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေပြီး ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “Quarantine Center တွေမှာ Q အရေအတွက်နဲ့ Volunteer အင်အားမမျှတာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတာ သတင်းတွေတက်လာတော့ မေလ တထောင့်တနေရာက ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲ...
အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်းကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ အသက် (၇၂) နှစ်အရွယ် မိခင်ဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုဗစ် Positive ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရိုးမအိမ်ယာမှာ ရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ဆီးချိုရောဂါအခံရှိသူဖြစ်တာကြောင့် စိတ်အပူလွန်နေရတဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ယခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ “ခင်ဘုဏ်း အမေ ၇၂နှစ် က မမျှော်လင့်ပဲ Covid positive ဖြစ်လို့ ရိုးမအိမ်ယာ မှာ ရောက်နေပါတယ် 😢😢 လူနာထားဖို့ မသင့်တော်တဲ့နေရာမှာ လူနာတွေ စု ထားပြီး ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက် မှုလည်းမရှိပါဘူး။ အမေက အသက်ရှုမဝတတ်သူမို့ ပြတင်းပေါက်ဘေးနားမှာ တံခါးဖွင့်ပြီးအိပ်နေရတယ်။ တစ်ကယ်ဆို အခြေအနေ မဆိုးတဲ့ Positive ဖြစ်တဲ့သူတွေ Hotel Quarantine ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Home Quarantine ပဲဖြစ်ဖြစ် Positive တွေအတွက်...
Roar Roar Kyaw ရဲ့ မေမေ ဆုပန်ထွာကတော့ ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သားသားလေးရဲ့ ၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးအတွက် ဆုတောင်းပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖေဖေ ဥက္ကာကျော် နဲ့ မေမေဆုပန်ထွာတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ ၄ နှစ်တင်းတင်းပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ ဆုပန်ထွာက ဒီနေ့လေးမှာကျရောက်တဲ့ သားဖြစ်သူ မွေးနေ့လေးကို ကိုယ်ဝန်စလွယ်ထားရစဉ်ကပုံလေးတွေနဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ချပြလာခဲ့တာပါ။ “Happy birthday မာမားသားလေး Roar Roar Roar Kyaw! သားလေးကိုယ်ဝန်စရှိတာသိတဲ့နေ့ကစလို့ ဒီနေ့ ၄နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ထိ စုလို့ရသမျှပုံလေးတွေ ဒီနေ့ Save ထားပါစေ။ စာလေးကတော့ ၃နှစ်ပြည့်မနှစ်ကတင်ထားတဲ့စာလေးအတိုင်းပြန်တင်ပါရစေ။ ပိုလာတာဆိုလို့ ၄နှစ်မပြည့်ခင်အတွင်း သားအမိနှစ်ယောက် ရန်ခဏခဏဖြစ်ရတာ ပိုလာပါတယ်။ ၄နှစ်ပြည့်ပြီမို့ သူ့အိုင်တင်တွေ ပြောတဲ့စကားတွေကပိုချစ်စရာကောင်း၊ရီစရာကောင်းလာသလို …ပြောမရဆိုမရကန့်လန့်တိုက်တတ်လာတဲ့အခါ နားလည်အောင်အာပေါက်အောင်ပြောပြရသလို ဆူရ၊မမ်ရ၊ ဒုတ်နဲ့‌ခြောက်ရ တဲ့အလုပ်တွေပိုလာပါပြီ။နဲနဲကြီးလာတော့သက်သာမယ်ထင်တာ ပိုမောလာတာတော့ သေချာပါတယ်။...
အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် ဒါရိုက်တာ ယုန်လေးက ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကို ဘာသာပေါင်းစုံအတွက် တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်တွေ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရာမှတဆင့် အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာသူ ယုန်လေးဟာ သရုပ်ဆောင်နှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ်ပါ ကူးပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တမူထူးခြားတဲ့ ဂိုဏ်းစတား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အတူ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေနဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ယုန်လေးဟာ အနုပညာအလုပ်တွေမှာ ကြိုးစားနေသူဖြစ်တဲ့အပြင် လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ချို့တဲ့လိုအပ်နေသူတွေကို ကူညီပေးနေသူတစ်ယောက်လို့ ပရိသတ်တွေက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့လေးကိုတော့ ယုန်လေးက သူစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဘာသာပေါင်းစုံအတွက် တတ်နိုင်သလောက် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလှူဒါန်းခဲ့ပုံလေးကိုလည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ “အစဉ်လာ မပြတ် မွေးနေ့ကို ဘုန်းကြီးကျောင်း Church ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း ဗလီ တို့ကို တက်နိုင်သလောက်လှူ အပြီး စာကလေးလွတ် . ငါးစာ . ခိုစာကြွေး ကြည်နူး...
အဆိုတော်နိုင်းဝမ်းက သူ့ရဲ့ချစ်ရသူလေးကို မနေ့ကပဲ သွားရောက်တင်တောင်းခဲ့တာပါ။ လက်ထပ်ဖို့ကိုတော့ ကိုဗစ်ပြီးတဲ့အခါကျမှ စီစဉ်ထားကြောင်း သူကပြောပါတယ်။ မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်ရသူကိုတော့ မိသားဖသားပီပီ သွားရောက်တင်တောင်းခဲ့တဲ့ နိုင်းဝမ်းက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ လက်မှတ်ရေးထိုးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိဘတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့အပြင် ယခုလိုသွားရောက်တင်တောင်းတာတွေကိုလည်း သူကိုယ်ပိုင်ရှာထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့သာ တင်တောင်းခဲ့ကြောင်း ယခုလိုပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ “ဒီနေ့က ကျွန်တော့ဘဝအတွက် အပျော်ဆုံးနေ့တွေထဲက နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်..လက်ထပ်ဖို့အထိရည်ရွယ်ပြီးအရမ်းချစ်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မိဘရဲ့အထောက်အပံ့မယူပဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးတွေနဲ့တင်တောင်းနိုင်ခဲ့လို့ပါ💪🏻💪🏻💪🏻ကျွန်တော်တို့စုံတွဲရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်တဲ့ဒီရက်လေးမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်သွားအောင် မြန်မာ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအတိုင်း မိသားဖသားပီပီတောင်းရမ်းခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ ဒီနှစ်ဝါကျွတ်ရင် လက်ထပ်နိုင်ဖို့ ချစ်သူရဲ့မိဘတွေထံမှ ခွင့်ပြုချက်လဲရခဲ့ပါပြီဗျ😇😇😇ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက်နေ့မှာ တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပြီး၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကိုတော့ ကိုဗစ်ကာလပြီးတာနဲ့ကျင်းပကြမှာဖြစ်ပါတယ်😍😍😍(ဒီထက်အကြီးကြီးတွေရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမဲ့ ကိုဗစ်ပေးတဲ့ဒုက္ခကြောင့် နဲနဲသေးသွားတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်စိန်တစ်ဆင်စာလေးအတွက်တော့ နားလည်ပေးပါသဲသဲလေးရေ😂😂😂)Happy Anniversary & Happy Birthday baby.. i love u so mwahhhh😘😘😘😘” နိုင်းဝမ်းက ချစ်သူကို ငွေသားတွေနဲ့ တင်တောင်းခဲ့တဲ့အပြင် ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့အတွက်ပါ...
ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင် နေတိုးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးက လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း သရုပ်ဆောင်မင်းသားနေရာကို ရရှိထားသူပါ။ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လို့ဆိုရလောက်အောင် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခြင်းခံနေရဆဲဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိလည်း လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် နေတိုးက ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ကားသစ်ကြီးတစ်စီးကို လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Surprise အဖြစ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ သူကိုယ်တိုင် Brand Ambassador ဖြစ်နေတဲ့ ကားကုမ္ပဏီကပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့လေးမှာ ကျရောက်တဲ့ သူ့မွေးနေ့အတွက် ကုမ္ပဏီက ကားသစ်တစီးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ကားသစ်တစ်စီးလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့အတွက် ထပ်တူကိုယ်စားပျော်ရွှင်ပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cele Star-YS Photos-Wai Min Maung
©2022 Myanmar Cele Star